Ndege yekurwira yeBritish RAF F-35 inorovera muGungwa reMediterranean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Ndege yekurwira yeBritish RAF F-35 inorovera muGungwa reMediterranean
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Ndege yekurwira yeBritish RAF F-35 inorovera muGungwa reMediterranean.
HMS Queen Elizabeth - mutakuri wendege wemuUK - aive nemaF-35 masere eUK muchikepe, pamwe negumi ekuAmerica F-10s. Yakadzokera kuEurope nguva pfupi yadarika mushure mekupedza mwedzi inodarika minomwe parwendo rwayo rwekutanga nemuSouth China Sea uye ichipinda munharaunda yeIndo-Pacific.
UK Royal Air Force F-35 yekurwisa ndege yakawira muGungwa reMedithera nhasi.
Mutyairi wendege akanunurwa zvakachengeteka ndokudzokera kumutakuri wendege.
Pakutanga muna Mbudzi, UK yakatora matatu eF-35 stealth fighters, nemutengo we£100 miriyoni ($135 miriyoni) imwe neimwe.
British Ministry of Defense (MoD) yakabudisa chirevo, ichizivisa kuti ndege yehondo yeRoyal Air Force (RAF) F-35 yakawira mu Gungwa reMediterranean nhasi. Mutyairi wejeti akwanisa kuburitsa zvakachengeteka mundege isati yaparara.
Mutyairi wendege akanunurwa zvakachengeteka ndokudzokera kumutakuri wendege uye kuferefetwa kwakatangwa pachiitiko ichi.
Maererano MoD Chirevo, "mutyairi weBritish F-35 kubva kuHMS Queen Elizabeth akaraswa panguva yekubhururuka nendege mu Mediterranean mangwanani ano."
"Hazvingave zvisina kukodzera kuti titaure zvimwe panguva ino," akadaro ushumiri akawedzera.
Tsaona yemazuva ano yeF-35 ndicho chiitiko chekutanga kutaurwa kune mutakuri wendege muUK, HMS Queen Elizabeth.
Pakutanga munaNovember, UK yakaunza varwi vatatu veF-35 stealth, nemutengo we£100 miriyoni ($135 miriyoni) imwe neimwe, zvichiunza huwandu hwese mungarava dzenyika kusvika makumi maviri neina.
Hurumende yeBritain yakaraira mamwe majeti matanhatu, ayo ari kutarisirwa kusvika gore rinouya, uye manomwe ari kutarisirwa muna 2023, nechinangwa chekuve ne48 inoshanda F-35s panosvika 2025.
Ministry of Defense haisati yatora ndege iyi, iyo inofungidzirwa kuti yakawira mugungwa na10am GMT neChitatu, uye hapana imwe ndege yakabatanidzwa muchiitiko ichi.
Zvisinei nekutangwa kwekuferefeta, ese asara maF-35 uye ndege dzekudzidzira dziri kuenderera mberi pasina kukanganiswa.